Mụọ 2 Trade 2021 Guide Na Penny Stock Trading! - Mụọ ahia 2 Eprel 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Nduzi Na Penny Stock Trading!
Penny ebuka bụ ụlọ ọrụ ndị bara uru na-erughị $ 5 kwa otu. Na tiori, nke a nwere ike ịgụnye ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ ndị edepụtara na isi ngwaahịa mgbanwe dịka NYSE na NASDAQ. Agbanyeghị, nkọwa sara mbara karị bụ nke ụlọ ọrụ obere okpu na-ere ahịa n'elu ahịa (OTC) dị ka Pink Sheets.
A na-ahụkarị azụmaahịa Penny ka ọ bụ ihe 'oke egwu, ụgwọ ọrụ dị elu', ebe ọnụ ahịa azụmaahịa nke ụlọ ọrụ nwere ike ịrịgo ma ọ bụ gbadaa n'ụzọ enweghị atụ. Nke a bụ n'ihi na penny mbak na-arịa oke volatility na obere mmiri mmiri.
In our Mụta 2 Trade 2021 Guide On Penny Stock Trading, anyị na-akọwa ihe niile enwere ịmara. Nke a na-agụnye nbibi zuru ezu nke ebuka penny, otu esi azụ ahịa na-arụ ọrụ, yana ihe ịkwesịrị ime iji malite ịzụ ahịa taa!
Kedu ihe bụ Penny Stocks?
Na mkpụmkpụ, penny ebuka kọwara site Securities na Exchange Commission (sec) dị ka a depụtara ụlọ ọrụ na a òkè ego nke $ 5 ma ọ bụ obere. N'echiche a, penny ebuka na-arụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla na mpaghara ahia ahia. Nke ahụ bụ ịsị, echiche dị oke mkpa bụ ịzụta penny ngwaahịa na olile anya na ọ ga-abawanye uru n'ọdịnihu.
Agbanyeghị, nkọwa dabara adaba nke ụlọ ọrụ penny ngwaahịa bụ ụlọ ọrụ ndị edepụtara n'ahịa OTC dịka Pink Sheets. Ka anyị na-ekpughere na nkọwa zuru ezu karị, mgbanwe OTC na-esiri ndị ahịa azụmaahịa ike ike, nke mere na ị ga-agabiga onye na-ere ahịa nke atọ.
Ka o sina dị, ebu penny nwere ụdị njirimara nke kewapụrụ ha na ụlọ ọrụ ndị na-acha anụnụ anụnụ. Oke mkpa, penny ebuka bụ obere obere ụlọ ọrụ nwere micro-market capitalization. N'ihi ya, ọnụ ahịa nke penny ebuka nwere ike ịrị elu na ala na ejiji ọkụ - ọbụlagodi karịa klaasị atụmatụ akụ dị ka cryptocurrencies.
Uru na ọghọm nke Penny Stocks Trading
Nnukwu ikike - tinye ego na ụlọ ọrụ tupu ọ ghọọ nnukwu
Ohere iji zụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwe ego na-enweghị imebi akụ
Ikike imepụta Pọtụfoliyo dị iche iche nke ebu penny iji belata ihe egwu ndị ahụ
Penny ebuka bụ otu n'ime ihe kachasị akụ na ụba na ohere itinye ego
Mgbasa dị oke obosara
O nwere ike isiri gị ike ire mkpụrụ ego penny dịka ọkwa ọkwa dị obere
A na-edekarị mkpụrụ ego Penny na ahịa OTC - nke na-eme ka o sie ike ịnweta
Ọnụahịa nwere ike ịrị elu ma gbadaa site na ọnụọgụ ọnụọgụ atọ n'otu ụbọchị ahia
Kedụ ka Penny Stocks ji arụ ọrụ?
Na tiori, penny ebuka bu ulo oru ndi obodo, ebe ha nwere ike ichota ego n’aka ndi n’enye ego di iche na nha. Otú ọ dị, nke a bụ ebe myirịta na-akwụsị. Iji maa atụ, chee echiche banyere ndepụta ndepụta ọtụtụ ijeri dollar nke Uber na nso nso a.
Companylọ ọrụ na-ekerịta ịnyịnya gafere usoro ntinye akwụkwọ miri emi na SEC, nke gụnyere ụlọ ọrụ ego buru ibu iji nyere aka bulie isi obodo. Mgbe ahụ, e depụtara ebuka na nnukwu mgbanwe ngwaahịa na ụwa - NYSE.
Nke a nwere ike ịga n'ihu na usoro achọrọ maka ụlọ ọrụ ngwaahịa penny. Nke ahụ bụ ịsị, ebe ebuka penny ka ga-agafe usoro IPO, ọ nweghị ebe dị nso na nyocha dị ukwuu site n'aka ndị na-achịkwa mba. N'ezie, ọtụtụ ụlọ ọrụ penny nke ụlọ ọrụ aha ọhụrụ edepụtara aha na ndebanye aha SEC!
N’ụzọ dị oke mkpa, ebuka penny ga - azụ ahịa na ahịa OTC, ma ọ bụghị nnukwu mgbanwe dị ka NYSE ma ọ bụ NASDAQ.
Penny Stock Trading na OTC ahịa
Ozugbo ụlọ ọrụ penny dechara IPO mbụ ya, ọ ga-akụzi ahịa nke abụọ. N'okwu Layman, nke a pụtara na ndị nwere ike ire ahịa ha na mgbanwe, nke ndị ọzọ nwere ike zụta. Dịka e kwuru n'elu, nke a ga-abụrịrị n'ahịa OTC.
Kedu ihe bụ OTC Market?
Ihe mgbochi, ma ọ bụ naanị ahịa OTC, na-enye ndị na-etinye ego aka ịzụ ahịa ego na mpụga mgbanwe ọdịnala. Abụọ isi egwuregwu a na ubi bụ Pink Ibé akwụkwọ - nke bụ naanị nwe, na OTC Bulletin Board.
Ugboro abụọ a nwere otu ihe - ọ dịghị ebe a na-ere ahịa. Kama nke ahụ, a na-eme azụmahịa na ntọala onye na-ere ahịa na - azụ ahịa - nke mechara na-ebute ohere itinye ego na-enweghị ihe ọhụụ.
Yabụ, ị gaghị enwe ike ịnọdụ ala na kọmputa gị wee lelee uru nke penny ebuka na-agbago na ala na nkeji nke abụọ. Kama, a na-eme ihe niile site na ekwentị.
Edepụtara ihe atụ kachasị elu na nke a:
Read na-agụ banyere ụlọ ọrụ uwe na-abịa na-abịa na nso nso a edepụtara na Pink Sheets
Na-ahụ a ngwaahịa ore ahia nwere kpọmkwem ohere Pink Ibé akwụkwọ, ka ha mara na ị chọrọ ịzụta $ 1,000 uru nke mbak
Oge ikpeazụ a na-ere mbak ahụ, ha kwụrụ $ 0.10 kwa ngwaahịa
Onye na-ere ahia na-akpọ oku ma chọta onye na-azụ ahịa ibe ya nke na-ejide obere penny ebuka iji kpuchie ahia ahụ
Onye na-ere ahịa na-akpọghachi gị ka o nye gị ọnụahịa nke $ 0.15 kwa ngwaahịa - 'naanị' 50% dị elu karịa azụmaahịa ikpeazụ
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, penny ebuka nwere ike ịkwaga na ọnụego parabolic - ọbụghị n'ihi na ndị na-ejide mbak na-enwekarị ike ịkọwa ọnụahịa ha na-ere ha!
Njirimara nke Penny Stocks
Penny ebuka dị iche na ụlọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ dị ka Apple, IBM na Facebook maka ọtụtụ ihe - nke anyị depụtara n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Ofdị Companlọ ọrụ
Nke mbụ, ụlọ ọrụ na-azụ ahịa penny na-abụkarị ụlọ ọrụ ọhụrụ dị mkpa iji bulie ego. Ha anaghị enwe ike iji ọwa ọdịnala dịka ụlọ akụ n'okporo ámá dị elu ma ọ bụ ndị isi ego, nke mere na ha na-atụgharị ahịa OTC.
Ozugbo, nke a kwesịrị igosi mgbịrịgba mkpu, n'ihi na enweghị nhọrọ ego nwere ike ịbụ n'ihi ahụike ụlọ ọrụ - ma ọ bụ otu n'ime ndị isi ya.
N'ihe banyere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ penny nwere ike ịbịa site na mpaghara ọ bụla.
Liquidity na-ezo aka n'ego nke ịzụ ahịa ego eji eme ihe. N'otu njedebe nke ụdịdị dị iche iche, nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Facebook, Amazon, na British American Tobacco na-ahụ maka azụmahịa ọtụtụ ijeri dollar kwa ụbọchị. Nke a bụ ọbụna ikpe na abụọ cryptocurrency dị ka BTC / USD.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ na-azụkọ penny na-abụkarị ebe obibi naanị iri puku kwuru puku dollar na azụmaahịa azụmaahịa kwa ụbọchị, nke na-ebute oke ọkwa mmiri dị ala. Nke a dị oke mkpa, ebe ọ pụtara na ị nwere ike ịgbalị iwepu mbak gị ozugbo ịzụrụ ha.
Ihe a na-ahụkarị na nke a bụ na ndị ahịa ọhụụ ọhụụ ga-enwe ọ excitedụ dị ukwuu ịhụ na ntinye ego penny ha abawanyela site na ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ, naanị na-ahapụ mmechuihu mgbe ha na-enweghị ike ịchọta onye zụrụ ahịa. N'ihi ya, a na-amanye ha ka ha ree penny ebuka na ọnụahịa dị ala karịa nke ahịa chọrọ.
Emehiela banyere ya, ego penny na-agbanwe agbanwe nke ukwuu. N'ebe a na-etinye ego ọdịnala, ụlọ ọrụ ndị isi edepụtara na NYSE ma ọ bụ NASDAQ ga-ebuli elu ma ọ bụ ala site na pasent ole na ole kwa ụbọchị.
Kama nke ahụ, penny stock trading nyiwe ga-ahụkarị okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ. Nke a na-eme ka penny ngwaahịa trading a ukwuu ize ndụ ego ụgbọala.
N'agbanyeghi klas ị na-azụ ahịa, ị ga-enwe mmekọrịta dị n'etiti mmiri na mgbasa. Ọmụmaatụ, ukwuu mmiri mmiri akụ dị ka gold na S&P 500 ga-erite uru site na mgbasa mmiri na-agbasaghị.
N'ime oghere mkpuchi, ebe Bitcoin na-erite uru site na mgbasa ozi kachasị asọmpi, mkpụrụ ego ERC-20 bụ nke dị iche. N'ihi ya, iji penny stock nyiwe na-ata ahụhụ site na mmiri dị ala dị ala, nke a pụtara na mgbasa na-abụkarị mbara igwe.
Yabụ kedu ihe kpatara nke a?
Ọfọn, ka anyị were ya na ị nwere anya gị na penny ngwaahịa edepụtara ọhụrụ nwere ọnụahịa ịzụta $ 0.22. Ozugbo ịzụrụ, ị ga-achọpụta na otu ngwaahịa ahụ nwere ọnụahịa ere nke $ 0.16.
Na pasent pasent, nke a pụtara na ị ka itinye iwu na a mgbasa nke 27.27%! Nke a pụtara na ịkwesịrị ịme ma ọ dịkarịa ala 27.27% na uru na penny ngwaahịa gị naanị iji mebie!
Mgbapụta na kpofuru
Mgbe ị nwere akụ nke nwere ụlọ azụmaahịa na mmiri dị ala, nnukwu volatility, na mgbasa na-agbasawanye - nke a bara ezigbo uru maka atụmatụ 'mgbapụta na mkpofu'.
Maka ndị na-amaghị, mgbapụta na mkpofu ga-ahụ otu ndị omee ọjọọ jikọtara ọnụ iji metụta ahịa.
Ka anyị kwuo na penny ngwaahịa nwere isi ahịa nke $ 550,000.
Otu ìgwè ndị na-etinye ego na-eme atụmatụ iji ngwaahịa penny rụọ ọrụ
Ha na-eme nke a site na itinye ọtụtụ ego n'ime ngwaahịa na oge akọwapụtara tupu oge eruo.
N'aka nke ya, ọnụahịa nke penny ngwaahịa ga-agba ngwa ngwa - na - akpata ihe a maara dị ka FOMO (Fearjọ Egwu Na - efu).
Dị nnọọ ka ndị na-atụghị anya na ndị na-achụ ego na-ekpebi ịzụrụ mbak na penny ngwaahịa, ìgwè mbụ nke ndị na-eme ihe ọjọọ ga-ebutu mbak ha na nnukwu uru.
Ka ha na-eme, ọnụahịa nke penny ngwaahịa ngwa ngwa na-amalite ịjụ - yana ndị metụtara ọghọm buru ibu nke itinye ego ha.
N’ụzọ dị oke mkpa, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ere ahịa penny. Ọ bụrụ na ọ mara mma nke ukwuu ịbụ eziokwu, ọ nwere ike ịbụ!
Mgbe edepụtara ụlọ ọrụ dịka Ford Motors, Disney, Nike, na ọtụtụ puku ndị ọzọ na nnukwu mgbanwe ngwaahịa, enwere ozi dị oke mkpa nke emere maka ọha na eze. N'ezie, ọ bụ ihe megidere iwu maka ụlọ ọrụ iji soro ndị ọzọ kwurịta ihe omume dị mkpa n'ebughị ụzọ mee ka ọha na eze mara ozi ahụ.
N'ime ime nke a, onye ọ bụla na-etinye ego na mpaghara nha anya dịka ha niile nwere otu data ahụ. Ihe ọ bụla dị mkpirikpi na ụlọ ọrụ a na-abanye na mpaghara 'ahịa ahia'.
Agbanyeghị - n'ihe banyere penny ebuka, enweghi ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ ndị edepụtara na mgbanwe OTC. Nke a bụ n'ihi na enweghị iwu iwu maka ụlọ ọrụ iji melite ndị na-etinye ego mgbe niile. N'ihi ya, ndị nwere nghọta nke ahịa OTC nwere uru dị iche.
Ọ bụghị mbibi na ọchịchịrị na penny ngwaahịa trading arena. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ụlọ ọrụ emeela mgbanwe site na obere penny òkè na nke nnukwu ụlọ ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, onye na-emepụta hydrogen Power Plug dị ọnụ na $ 0.15 azụ na 2013. Ọsọ ọsọ na-esote Machị na-esote ya na ụlọ ọrụ kụrụ ọnụahịa kacha elu nke $ 10.31.
Monster Beverage Company bụ akụkọ ka ukwuu na-aga nke ọma. Laa azụ na 1995, e keere ọnụahịa ya naanị $ 0.63. Ndị kwadoro ụlọ ọrụ ahụ n'oge mmalite ya akwụla ụgwọ, dịka Monster Beverage Company dị ugbu a ihe karịrị $ 72 na NYSE. Nke a gosipụtara ịrị elu nke ihe karịrị 11,600%.
Mgbe ahụ ị nwere ụdị ụlọ nri BJ, nke nwere ọtụtụ agbụ na United States. Mgbe ọ na-ere ahịa naanị $ 0.88 na 1997, ọ nwegogo ihe karịrị $ 50 kwa otu. Thelọ ọrụ ahụ alaghachila na mpaghara $ 20- $ 25, mana nke a bụ akụkọ ịga nke ọma n'agbanyeghị!
Penny Stock Trading Atụmatụ
Penny ngwaahịa trading abụghị ihe ị ga-anwa ma ọ bụrụ na i nwere a nghọta nke ihe ize ndụ. N'iburu nke ahụ n'uche, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere gị aka n'ụzọ.
1. Bido n’obere osisi
Y’oburu n’agha kwado ulo oru obere-ulo oru, odi nkpa ka ijiri obere ego malite. Ekwela ka eburu gị naanị n'ihi na uru nke ngwaahịa a dị obere. Kama nke ahụ, ọ ka mma itinye ego na obere ntinye karịa ịgbanye nnukwu ego.
2. Mee nchoputa ka ike kwere gi
Dika anyi kpuchitere na mbu na ntuziaka anyi, ulo oru ndi penny abughi iwu kwadoro ka ha wepu okwu ndi mmadu. Nke a pụtara na a ga-enwe oké ụkọ nke ozi ị nwere.
N'iburu nke a n'uche, ọ ga-adị gị mkpa iji ọtụtụ awa na-eji ọtụtụ ozi dị na ngalaba ọha. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-enweghị ike ime ka ihe asian mkpebi n'ihi a enweghị data, ị kwesịrị ị na-eleghị anya zere itinye ego na ike.
3. Ntughari di iche
N'elu itinye ego na obere osisi, ikwesiri igbanwe ọtụtụ ihe ị nwere ike. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị dị njikere itinye ego $ 5,000 n'ime ebuka penny. Kama itinye ego na otu ụlọ ọrụ, ị ga-aka mma ịkwado ụlọ ọrụ 50 na $ 100 ọ bụla.
N'ime ime nke a, ị gaghị enwe mmetụta mmetụta nke penny ngwaahịa kpofuru ebe ọ bụla dị nso. Iji were ihe gaa n'ọzọ ọzọ, ị ga-atụle ịtụgharị n'ime ọtụtụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, chee echiche maka ụlọ ọrụ na-akwado mmanụ na gas, uwe, nri na ihe ọverageụverageụ, ego, ụlọ ahịa, na ndị ọzọ!
4. Zere ndị ọkachamara na-azụ ahịa Penny Stock
Agbanyeghị na ọtụtụ ndị na-ahụ maka itinye ego na-ata ahụhụ site n'aka ndị akpọrọ 'ndị ọkachamara', ọ nweghị ihe dabara nnọọ na oghere penny. More kpọmkwem, internet na-jam-juru na ọkachamara ahịa na kweere na ha nwere na 'nzuzo ihendori' iji bulie ọzọ nnukwu penny ngwaahịa.
Nke a n'onwe ya na-arụ ọrụ dị ka mgbapụta na atụmatụ mkpofu, dị ka ebumnuche kachasị bụ ịmepụta FOMO. Nke ahụ bụ ịsị, ọ bụrụ na onye ahụ a na-akpọ ọkachamara nwere ike ime ka ndị mmadụ kwenye na penny ngwaahịa n'ọnụ ahịa ha ga-agbawa n'oge na-adịghị anya, nke a ga-eme ka ụzọ wee dị mma ahịa.
5. Igosi na ya kwesịrị ịdị uchu n’ahịa gị
Ọ dịkwa mkpa ịrụzu ịdị uchu na onye na-ere ahịa penny. A sị ka e kwuwe, ndị na-ere ahịa nwere ohere ịnweta ahịa OTC ga-enweta ihe ọmụma na ọha na eze abụghị. Nke a na - etinye ha na ọdịiche pụrụ iche karịa gị dịka onye na - etinye ego. Ka o siri dị, soro naanị onye ejiri aha ya na-azụ ahịa nwere aha dị ogologo na oghere.
Penny Stock ọzọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ọhụụ, ọ nwere ike ịba uru ịtụle atụmatụ gị itinye aka na penny ngwaahịa trading. Ma ọ bụ ọkwa dị elu, ọkwa na-agbasa, ma ọ bụ enweghị ego - ọhụụ penny anaghị adị mma maka ndị na-enweghị ego. Ọbụlagodi na ịchọrọ ịmaba, ị ga-ahụ ya nke siri ike ịnweta oghere na Pink Sheets na OTC Bulletin Board dị ka onye na-ere ahịa azụmaahịa.
N'iburu nke a n'uche, ọ nwere ike ịba uru ngwaahịa CFDs n'echiche ọdịnala. Echefula, ụlọ ọrụ ka na-ekekọ ụlọ ọrụ dị ka penny ngwaahịa site na SEC ọbụlagodi na edepụtara ya na isi mgbanwe ngwaahịa - ọ bụrụhaala na ọ nwere ọnụahịa oke nke ihe na-erughị $ 5. N'ihi ya, ngwaahịa CFD na-ere ahịa ga-enye gị ohere ịnweta 'penny mbak', mana na gburugburu iwu.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị kpebie ịzụ ahịa ndị edepụtara na London Stock Exchange, ị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a nwere ọnụ ahịa ndị na-erughị $ 5. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ahịa ngwaahịa ụlọ ahịa dị na UK na-akwụ ụgwọ ya mbak na pence, n'adịghị ka pound!
N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ uru nke ịhọrọ ngwaahịa CFDs kama ịnwa ịzụta penny mbak na ahịa OTC.
Ngwaahịa Stock CFD ga-enwerịrị ikikere azụmaahịa. Anyị na Mmụta 2 Trade na-aga n'ihu site na naanị ịkwado ndị na-ere ahịa nke nwere ikike otu otu.
Nke a gụnyere ihe masịrị ndị FCA (UK), ASIC (Australia), CySEC (Saịprọs), na MAS (Singapore). N'etiti mkpokọta usoro nchebe ndị ọzọ, ụlọ ọrụ ikikere nke otu na-achọ ka ndị na-ere ahịa CFD debe ego ndị ahịa na akaụntụ ego iche.
Isi na Nwee Mgbanwe
Mgbe ị jiri onye na-ere ngwaahịa CFD, ị ga-enwe ike ịnweta mgbanwe (US, UK, Japan) na obere (Australia, Canada, Germany, wdg) na pịa bọtịnụ. Nke ahụ bụ ịsị, ị ga-enwe ike ịzụta ma ọ bụ ree ụlọ ọrụ ị họọrọ na desktọọpụ gị ma ọ bụ ekwentị gị.
Nke a dị nnọọ iche na penny ngwaahịa trading broka, nke chọrọ ka itinye iwu na ekwentị. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe ọ bụla dị na penny ngwaahịa ohere, dịka onye na-ere ahịa ga-achọ ime ihe ị chọrọ site na isoro ndị ọzọ na-azụ ahịa na-akparịta ụka!
Mgbasa agbasa na ụgwọ dị ala
I nwere ike icheta na anyị na-ekwu maka etu mgbasa ahụ siri dị mgbe ị na-azụ ma na-ere penny ebuka na ahịa OTC. Na ngwụcha, nke a bụ ego azụmaahịa na-aga n'ihu na-eme ka ọ sie ike ị nweta uru n'ikpeazụ.
N'ihe banyere ngwaahịa CFDs, ị nwere ike ịzụ ahịa ụlọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ na mgbasa nke ihe na-erughị 1 pip. Ọzọkwa, imirikiti saịtị azụmaahịa anyị na-akwado na ibe a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na enweghị ọrụ - yabụ ọ bụ naanị mgbasa ị na-akwụ!
Paykwụ ụgwọ dị mfe
Mgbe ị na-azụ penny ebuka na a CFD ore, ị ga-erite uru site enweghị nkebi nkwụnye ego na ndọrọ ego usoro. Imirikiti nyiwe na-enye gị ohere iji akaụntụ debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ na-akwụ ụgwọ na akaụntụ gị, ụfọdụ na-akwadokwa e-wallets. Nke a na-eme ka ọ super-mfe iji nweta ego n'ime na nke gị trading akaụntụ.
Kacha mma Penny Stock Trading nyiwe 2021
Yabụ ugbu a na ị maara ins na out nke otu penny ahia ahia na-arụ ọrụ, anyị na-aga ugbu a ịtụle ụfọdụ n’ime ndị ahịa anyị kachasị elu nke 2021. Rịba ama, ndị na-ere ahịa ndị edepụtara n’okpuru ebe a na-ezute nkọwa SEC nke penny ebuka - nke pụtara na ha depụtara ụlọ ọrụ nwere oke ọnụ ahịa nke na-erughị $ 5.
N'ụzọ dị oke mkpa, ndụmọdụ anyị niile na-achịkwa, na-akwado ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, ma na-enye ndị ahịa ọrụ kachasị elu.
1. eToro - Usoro CFD kachasị mma maka ndị mbido
Ọ bụrụ n'inweghi ahụmịhe banyere etu ebuka na mbak n'ịntanetị na-arụ ọrụ, ọ nwere ike ịba uru ịtụle eToro. Onye na - ere ahịa ntanetị - nke na - enye gị ohere karịrị 800 mbak gafee ọtụtụ ahịa ahịa, dabara adaba maka onye ahịa ọhụrụ.
Ọ na-ewe naanị oge iji mepee akaụntụ ma ị nwere ike itinye ego na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, ma ọ bụ obere akpa. Nke kachasị mma, azụmahịa azụmaahịa a na-ahụkarị na-abịa na enweghị oke ụgwọ ebubo na-abụghị mgbasa. N'usoro iwu, eToro nyere ikikere site na FCA, CySEC, na ASIC.
4. AVATrade - Guzosie ike ore ahia na uko agbasa
AVATrade bu ulo ahia guzobere na-enye mgbasa juputara. Ga-enweta ọtụtụ puku CFDs - gụnyere nke ebuka. Ikpo okwu a na-akwado MT4, na - enye gị ohere idokwa robot azụmaahịa akpaghị aka.
AVATrade nwere obere nkwụnye ego nke naanị $ 100, nke ị nwere ike ịkwado site na debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ waya akụ. A na-achịkwakwa AVATrade nke ọma, yana ikikere enwere n'ọtụtụ ọchịchị.
Na nchịkọta, penny ngwaahịa trading bụ ụlọ ọrụ jupụtara na aghụghọ. Ikwesiri ịjụ onwe gị ma ọ bara uru ịnwa itinye ego na ngalaba ego nke bụ ebe obibi maka nkeji oge, ịgbasa agbasa, yana echiche banyere West West. N'ezie, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị kpebie ịmaba, ị ga-ahụ na ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume ịnweta ahịa OTC. Kama, ikwesiri ịgafe onye na-ere ahịa nke atọ.
Dị ka ndị dị otú a, anyị chere na ọ bara uru ịtụle ọdịnala ngwaahịa CFD. Nke a ga - enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na pịa bọtịnụ dị na gburugburu ebe obibi. N'ụzọ dị oke mkpa, ị gaghị ere ahịa akụ nwere ike tufuo 90% na uru karịa otu ụbọchị - yabụ ị ga-enwe ohere ka mma iji nwee ọganiihu nke itinye ego n'ịntanetị!
Gịnị bụ nkọwa nke penny ngwaahịa?
Dabere na Nzuzo na Exchange Commission (SEC) - a na-akọwa penny ngwaahịa dị ka ụlọ ọrụ edepụtara n'ihu ọha na ọnụahịa nke ihe na-erughị $ 5.
Kedu mgbanwe ndị a na-ere ebuka penny?
Penny ebuka na-azụkarị ahịa na ahịa ndị ọzọ dịka Pink Sheets na OTC Bulletin Board. Mgbanwe ndị a siri ike ịnweta dị ka onye na-ere ahịa ahịa, nke mere na ị ga-eji onye na-ere ahịa nke atọ.
Kedu ihe bụ penny stock 'pump and dump'?
Penny ngwaahịa mgbapụta na ekpofu ga-ahụ otu ndị mmadụ na-achịkwa ahịa site na itinye ego n'otu ụlọ ọrụ. N'ime ime nke a, ọ ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ n'ụzọ dị elu, nke ga-eme ka ndị na-enweghị ego na-atụghị anya na-agbaso. Ndị omekome ahụ ga-erezi oke ha na nnukwu uru, ya na ndị na-atụghị anya ha ga-efunahụ mgbe ngwaahịa ahụ dara.
Kedu ihe bụ ezigbo ihe ọzọ na ngwaahịa penny?
Uzo ozo kacha mma na penny ebuka bu nke ahia ahia CFD. You ga-azụ ahịa ụlọ ọrụ buru ibu na ihu ọha na gburugburu ebe a na-achịkwa nke ọma.
Kedu ka m ga esi ere ahịa penny m?
A na-ekwukarị na ịzụta penny ebuka bụ akụkụ dị mfe. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike isiri gị ike ịchọta onye na-azụ ahịa mgbe ọ na-ebute iwepụta mbak gị. N’uzo di nkpa, onye ahia gi choro choro ichota onye ahia ya n’aha gi.